एकान्तबास ! - Lokpath Lokpath
२०७७, ११ जेष्ठ आईतवार १९:२४
प्रकाशित मिति : २०७७, ११ जेष्ठ आईतवार १९:२४
म ८७ बर्षको भएँ, एक्लो छु । अठार सय तीन नामक फार्म हाउसको एकतलामा बस्छु । यो त्यहि ठाउँ हो, जहाँ गृहयुद्धको समय देखी मेरो परिवार बस्दै आएको थियो । जब मेरो हजुरबुवाको निधन भयो, त्यसपछि मेरो हजुरआमा केट पनि यहि ठाउँमा एक्लै बसिन् ।
उनका तीन छोरीहरु कहिलेकाँही भेट्न आउँथे, उनलाई एक्लै नबस्न सुझाउँथे । तर, उनलाई आफ्नो पति गुमाएको यहि ठाउँ नै प्यारो थियो । बाँचुन्जेल छोड्न मानिनन् ।
हजुरआमाको पनि ९७ बर्षको उमेरमा सन् १९७५ मा निधन भयो । त्यसपछि यो ठाउँ मेरो भयो । उनी गईसकेपछिका बिषम ४० बर्ष यँहा रहेका दुई कुर्सी मध्ये कुनै एकमा बसेर म आफ्नो एक्लो जीवन बिताइरहेको छु ।
निलो कपडाले बेरिएको थोत्रो कुर्सीमा बसेर झ्यालबाट बाहिर हेरिरहन्छु । पर फुङ्ग रङ उडिसकेको ठुलो फार्महाउस देखिन्छ । सधै सुनौला रङका गाई र घोडाहरुले भरिभराउ हुने त्यो ठाँउ आजकाल सुनसान छ । जसरी म एकान्तवासमा एक्लो जीवन बिताईरहेको छु, उसैगरि त्यो फार्महाउस पनि एक्लो छ ।
म बसन्तमा फूल्ने रङ्गिन फूल हेर्छु । फुरुरु बर्सिरहेको हिउँ हेर्छु । टेलिभिजनमा समाचार पनि हेर्छु तर प्रायः आवाज सुन्दिन । झ्याल छेउमा बसेर यि हरफहरु लेखिरहँदा एकान्तवासको सान्त्वना दिदै म आँफ्नै मनसँग झुटो बोल्छु ।
मान्छेहरु मलाई भेट्न आउँन चाहन्छन् । म अस्विकार गर्छु । मलाई मेरो एकान्त नै प्यारो छ । यो एकान्तपन गुमाउँन म तयार छैन । मसँग खुवै मिल्ने मेरा दुईजना पुरुष साथीहरु पनि छन् । उनीहरु न्यु ह्याम्पसरका हुन्, आजकाल म्यानहटनमा बस्छन् ।
हप्ताको दुईरात लिण्डा मेरोमा आउँछिन् । क्यारोल पनि हप्तामा केही घण्टा आउँछिन्, लण्ड्रिको लागि । उनी मेरो औषधीको गोलीहरु गन्छिन् । फेरी कहिले ल्याउनुपर्ने हो, हिसाब गर्छिन् । म उनी आउँने बाटो हेरिरहन्छु । जब उनी निस्किएर जान्छिन्, म आनन्द महसुस गर्छु । मेरो शुन्यता फिर्ता भएकोमा कृतज्ञ हुन्छु ।
म सन् १९२८ मा जन्मेँ । बाआमाको एक्लो सन्तान हुँ । म मात्र होइन, हाम्रो स्प्रिङ ग्लेन इलेमेन्ट्री स्कुलमा आठ कक्षासम्म पढ्ने विद्यार्थी कसैको पनि दाजुभाइ दिदीबहिनी थिएनन् । त्यो आर्थिक मन्दीको समयमा जोडीहरुलाई एउटै सन्तानमा चित्त बुझाउनु पर्ने बाध्यता थियो ।
बच्चा बेलामा मैले एउटा साथी बनाएको थिएँ । तर, साथित्व लामो समय टिक्न भने सकेन । त्यो साथी, चार्ली एलेक्स, काठका टुक्रा र कागजबाट हवाईजहाज बनाउँन मन पराउँथ्यो । उसकै सिको गरेर मैले पनि बनाएँ ।
तर, म विचित्रको थिएँ, कागजको पखेटामा सिमेन्ट हालिदिन्थेँ । उ खुवै रिसाउँथ्यो, झगडा गथ्र्यो । उसँग छुट्टिएपछि मैले हुलाक टिकटहरु संकलन गर्न थालेँ, डिजाइन पनि गरेँ । यो कामबाट पनि मलाई दिक्क लाग्यो ।
सातआठ कक्षातिर पढ्दा केटी साथीहरु पनि बनाएको थिएँ । म अहिले बार्बरा पोपलाई सम्झिरहेको छु । एकदिन उनको ओछ्यानमा कपडा सँगै उनी र म सुतेको पनि याद आईरहेको छ । त्यो दिन जब उनको आमाले हामीलाई ओछ्यानमा देखेर रिसाएर हेरिन्, त्यसपछि भने हामी छुट्टियौँ ।
स्कुलबाट फर्किएपछि घरमा म एक्लै बस्न रुचाउँथे । बैठक कोठाको एउटा कुनामा धुम्धुम्ती बस्थेँ । दिउँसै सपना देख्थेँ । मेरी आमा कि त किनमेलमा निस्किएकी हुन्थिन्, कि त साथीहरुसँग पुल खेल्न जान्थिन् । बुवा चाँही सधै आफ्नो कार्यालयमै व्यस्त हुन्थे ।
एउटा गर्मीयाममा मैले घर छोड्ने निर्णय गरेँ । तर, कता जाने भनेर मेरो दिमागले निर्णय गर्न भने सकिरहेको थिएन । झल्यास्स न्यु ह्याम्पसायर फार्ममा घाँस काटेर बसिरहेका बृद्ध हजुरबुवाको अनुहार याद आयो । एकाएक मलाई ठुलो राहत मिल्यो ।
म हजुरबुवाले बिहान बेलुका गाईको दुध दुहुएको हेरिरहन्थेँ । साना–साना काम सघाईदिन्थेँ । आफ्नो लागि लन्च आँफै बनाउँथेँ । ठुलो ब्रेडमा प्याज काटेर हाल्थेँ । त्यो स्याण्डविच जस्तै हुन्थ्यो । मैले त्यसलाई आफ्नै नाम दिएको थिएँ— बिफोर स्याण्डविच ।
जब म १५ बर्षको भएँ, दुई बर्षे हाइस्कुलको लागि एक्सेटर एकेडेमी गएँ । त्यँहा पढ्नको लागि गाह्रो थियो, बरु हार्वर्डमा पढन् सजिलो थियो ।
त्यहाँ बसेका ति दिनहरु म आजपनि घृणा गर्छु । छात्रवासमा एउटा कोठामा दुईजनाको हिसाबमा पाँच सय केटाहरु बस्थे । यस्तो वातावरणमा मैले खोज्ने एकान्तता कसरी मिल्थ्यो र ! तैपनि म शान्तिसँग बस्न प्रयत्न भने गरिरहन्थे ।
एकान्तको मज्जा लिन चुरोट पिउँदै एक्लै हिड्न निस्किन्थेँ । तर त्यसले कति समय नै बित्थ्यो र ! फेरी त्यहि कोलाहालमा फर्किनु परिहाल्थ्यो । मलाई सिंगल रुमको आवश्यकता थियो, मिलाउँन कोसिस गरिरहेँ । अन्ततः एकदिन कोसिस सार्थक भयो, रुम फेला पारेँ ।
अब म मन लागे जति पढ्न सक्थेँ, लेख्न सक्थेँ । जब शनिबार आउँथ्यो, कोही बास्केट बलको कोर्टमा पुग्थे, कोही फिल्म हेर्न दर्गुथे । म भने कोठामै एकान्तको मज्जा उठाउँथेँ ।
तिन बर्ष सम्म त्यो कोठामा एक्लो थिएँ । भिडभाड थियो त कोठामा राख्न मैले किनेका सामानहरुको मात्र थियो । युनिभर्सिटीमा सिनियर विद्यार्थी भईसकेपछि त मैले सुत्ने कोठा, बस्ने कोठा र वाथरुम समेतको व्यवस्था मिलाएँ । जसले मेरो बसाई व्यवस्थित त भयो नै, सँगसँगै एकान्तवासको मज्जा झन् बढी भयो ।
अक्सफोर्डमा रहँदा सुरुमा नै दुईवटा कोठा दिईएको थियो । हुन त त्यँहा सबै बिद्यार्थीलाई डबल रुम दिईन्थ्यो । अक्सफोर्डमा हुँदा नै मैले फेलोसिप सुरु गरेँ । सँगसँगै एउटा किताब पनि लेखेँ ।
अब मलाई जागिर खोज्नु थियो । त्यतिबेला मैले मेरो पहिलो श्रीमती बिहे गरिसकेको थिएँ । म २० बर्षको थिएँ, उनी २३ बर्षकी थिईन् । हामी एनआर्वरमा सेटल भयौँ । म मिसिगन विश्वविद्यालयमा अँग्रेजी साहित्य पढाउन थालेँ ।
मलाई लेक्चर हलको प्यासेजमा अगाडि पछाडि हिडिरहन मन लाग्थ्यो । कहिले आइसिर कवि एट्स र ज्वयस्को बारेमा गफ गर्थेँ त कहिले थोमस हार्डी र यन्ड्रियु मार्भेलको कविताको कुरा गर्थेँ । ति आनन्ददायी पलमा म विरलै एक्लै हुन्थेँ, तर घर फर्किएपछि भने म सानो कोठामा कविता लेखेर घण्टौँ बिताउँथे ।
मेरी असाध्यै बौद्धिक श्रीमती साहित्यमा भन्दा हिसाबकिताबमा बढी ध्यान दिने थिइन् । हामी सँगै त बस्थ्यौँ तर बेग्लाबेग्लै हुर्किरहेका थियौँ । हाम्रो विचार मिल्दैन थियो । हाम्रो रुची फरकफरक थियो । जमघट, पार्टीहरुमा रमाउने स्वभाव थियो उनको । म भने ठिक विपरित थिएँ ।
मैले जीवनमा एकपटक मात्र सामाजिक भेलामा उपस्थिति जनाएँ । त्यो पनि एनआर्वरको साँस्कृतिक कक्टेल पार्टी थियो । त्यसपछि त म हरेक सप्ताहन्तको पर्खाइमा हुन थालेँ, ताकी त्यसले हाम्रो वैवाहिक जीवनमा दुरी बढाईदियोस् ।
हामीले चाडपर्व परेका त्यस्तै दुईतीन वटा शुक्रबार देखी शनिबार सम्म लगातार पियौँ । बैठक कोठाको वल्लोछेउ र पल्लोछेउ गर्दै पियौँ । होसमा पियौँ, बेहोसीमा पियौँ । फल्ट ग-यौँ, भनाभन ग-यौँ । तर, भोलीपल्ट आइतबार ति सबै कुराहरु बिर्सिदिन्थ्यौँ ।
वैवाहिक जीवनमा आएका आरोह अवरोह पार गर्दै बिहे गरेको १६ बर्षपछि हामीले डिभोर्स ग-यौँ ।
फेरी पाँच बर्ष म एक्लै भएँ । त्यँहा कुनै आनन्दायी एकान्तपना थिएन । म एकान्तता चाहन्थेँ, तर त्यो एकान्तवासमा एक असल श्रीमतीको साथ चाहन्थेँ । म जे चाहन्थे त्यो मैले पाइनँ । मैले ह्विस्कीसँग मेरो खराब वैवाहिक जीवनका पिडा निक्कै साटेँ ।
त्यहिवीचमा एकजना युवती मसँग डेट गर्न आईपुगि । उ दिनकै दुई बोतल भोड्का पिउँथी । त्यो समय म हप्ताकै तिनचार जना आईमाईसँग डेट गर्थे। कहिलेकाँही त दिनकै तीनजनासँग सम्म पनि डेट हुन्थ्यो । मेरो दैनिकी डेटिङमै वितिरहेको थियो ।
यस्तो दैनिकीले मेरो कविता लेख्ने काममा ढिला हुन थाल्यो । अन्ततः लेख्न नै बन्द भयो । तैपनि, म खुशी भएर बस्ने कोसिस गर्थे। तर सक्दिन थिएँ । मलाई लाग्न थाल्यो, अब मैले यस्तो बानी त्याग्नु पर्छ । तत्कालै त्यो पियक्कड युवतीसँग टाढा हुने निधो गरेँ । आफ्नो पढाउने कामतिरै केन्द्रित भएँ ।
जेन केन्यन मेरो विद्यार्थी थिईन् । स्मार्ट थिईन् । कविता पनि लेख्थिन् । कक्षामा उनी जत्तिको स्पष्ट र रमाइली अरु थिएनन् । उनीप्रति म दिनप्रतिदिन आकर्षित हुन थालेँ । उनले थाहा नपाउने गरि उनको बारेमा बुझ्न पछि लागेँ ।
मैले थाहा पाएँ, उनी मेरो घर नजिकैको छात्रावासमा बस्दिरहिछिन् । एकदिन मैले उनीसँग एक घण्टा लामो गफ गरेँ । त्यो रात मेरै घरमा बस्न बोलाएँ । उनी आईन् । हामी ओछ्यानमा गयौँ । स्वतन्त्रतापुर्वक एकअर्कामा समाहित भएर चरम सन्तुष्टिमा लिप्त भयौँ । अबेर रात बेडबाट उठेर सँगै डिनर ग-यौँ ।
त्योबेला हामी हप्ताको एकपटक भेट गथ्र्यौँ । विस्तारै एकबाट दुई, तिन, चार हुँदै हप्ताको सातै दिन भेट गर्न थाल्यौँ । यद्यपी, हामी भिन्नाभिन्नै पार्टनरसँग डेटिङ पनि गरिरहेकै थियौँ । एकरात हामीले विवाह गर्नेबारे कुरा ग-यौँ । तर, त्यो विषय उति नै बेला अन्यत्र मोडियो । किनकी उनको र मेरो उमेरको अन्तर १९ बर्षको थियो । यदि हामीले बिहे गरे, उनले विधवा भएर निक्कै बर्ष बस्नुपर्ने हुनसक्थ्यो ।
तर, प्रेमले कहाँ त्यसरी हिसाब गथ्र्यो र ! हामी गहिरो प्रेममा थियौँ । अन्ततः सन् १९७२ को अप्रिलमा बिहे ग-यौँ । त्यतिबेला म ४४ बर्षको थिएँ, उनी २५ बर्ष कि थिइन् । मेरो यो दोस्रो बिहे थियो, उनको पहिलो । बिहे पश्चात् को तीन बर्ष त्यहाँ बसेर हामी सन् १९७५ मा न्यु ह्याम्पसर आयौँ । उनले यो पुरानो पारिवारिक घरलाई खुव माया गरिन्, रमाइन् ।
लगभग २५ बर्ष, हरेक विहान उनी भन्दा अगाडि म उठ्थेँ । उनलाई बेडमै कफि पु-याईदिन्थेँ । उनी अबेर उठेर कुकुर डुलाउन निस्किन्थिन् । उनी फर्किएपछि हामी बेग्लाबेग्लै रुममा बसेर कविता लेख्थ्यौँ । मध्यान्नतिर हाम्रो लन्च टाईम हुन्थ्यो । लन्चमा हुन्थ्यो स्याण्डविच ।
लन्चपछि केहीबेर एकआपसमा नबोली टहलिन्थ्यौँ । पच्चिस मिनेट जति बेडमा सुस्ताउथ्यौँ पनि । त्यसरी सुस्ताउनुले शरीरलाई दिनभरिको लागि उर्जा मिल्थ्यो । त्यसपछि हाम्रो दैनिक सहवासको समय हुन्थ्यो । एकअर्काको अंगालोमा बेरिन्थ्यौँ । जब उनी चरमोत्कर्ष पुग्थिन्, त्यसपछी भने उनलाई कार्यकक्षमा जान हतारो हुन्थ्यो ।
दिउँसो अबेर हामी कार्यकक्षमा जान्थ्यौँ । वर्डस्वर्थको प्रिलड, हेन्री जेम्सको द एम्बासिडर, द ओल्ड टेस्टामेन्ट, विलियम फाक्नर र उनका सत्तरी दशकका कविताहरु एक घण्टा सम्म ठुलो स्वरमा पढेर म उनलाई सुनाउँथेँ ।
बेलुका भएपछि म वियरको चुस्की लिदै द न्युयोर्करमा आँखा डुलाउँथेँ । उनी वाइनको चुस्कीसँगै डिनर तयार गर्न भान्सा छिर्थिन् । मेहेनत गरेर विभिन्न स्वादिला परिकार बनाउँथिन् । मैनबत्तिको मधुरो उज्यालोमा आमुन्नेसामुन्ने वसेर गफिदै डिनर ग-थ्यौँ ।
गर्मीयामका मध्यान्नहरुमा हामी समुन्द्रको किनारमा पुग्थ्यौँ । पानीमा डुबुल्की मा-थ्यौँ । उनी बालुवामा घोप्टो परेर घाम ताप्न मन पराउँथिन्, म भने डोरीको कुर्सीमा बसेर किताब पढ्थेँ । कहिलेकाँही त हामी छिट्टै डिनर बोकेर खान किनारमै पुग्थ्यौँ । यस्तै रमाईलो गरेर, सँगै लेखेर, सँगै एकान्तवासको मज्जा उठाएर वैवाहिक जीवनका पच्चिस वसन्त पार ग-यौँ ।
सन् १९९५, अप्रिल २२ का दिन ल्युकेमिया रोगले उनलाई यस धर्तिबाट उठाएर लग्यो । यस संसारमा उनी थोरै दिनको मात्र पाहुना थिइन् । पच्चिस वसन्तको छोटो सहयात्रालाई टुङ्ग्याउँदै उनी मसँग सँधैको लागि विदा भईन् ।
सोचेको थिएँ, धेरै बर्ष उनी विधवा हुनेछिन् । तर, नियतिले सोचे जस्तो कँहा गरिदिन्छ र ! बिदुर हुन त मलाई पो लेखिएको रहेछ !
आज सन् २०१६ को उहि अप्रिल २२ को दिन हो । जेन वितेको पनि ठ्याक्कै एक्काइस बर्ष भयो । मेरो जीवनको यो ८७ औँ बर्षमा, मलाई उनको शोक त्यस्तो परिरहेको छ, जस्तो यो भन्दा पहिले कहिल्यै अनुभव गरेको थिइनँ । उनी थलिएर जीवनका अन्तिम दिनहरु व्यतित गर्दैगर्दा डेढ बर्ष सम्म उनको हात सुम्सुमाउँदै म उनकै छेउमा बसिरहेँ ।
उमेर नै नपुगी भएको उनको देहवसानले मलाई सधै दुःखी बनाईरह्यो । म अहिले कल्पना गर्छु— यदि उनलाई मैले बचाउन सकेको भए, मेरो जीवनको उत्तराद्धको यो घडिमा हरेक पल उनी मेरै साथमा हुने थिइन् सायद ।
बितेको दुई दशक भन्दा बढीको मेरो एक्लो एकान्तवास नै अब मलाई प्रिय छ । सुनसान घरको एक थोत्रो कुर्सीमा बसेर म झ्याल बाहिर हेरिरहन्छु । चरा उडिरहेको देख्छु । आकाश देख्छु, समुन्द्र देख्छु । बगैँचामा फूलिरहेका रङ्गिन फूलहरु हेर्छु । रमाईरहेका पुतली हेर्छु । यसैगरी एकान्तवासमा बसेर म मृत्यु कुरिरहेको छु ।
(विश्वप्रसिद्ध अमेरिकी लेखक डोनाल्ड हलको द न्युयोर्करमा सन् २०१६ अक्टोवर १५ मा प्रकाशित भएको आफ्नो एकान्तवास सम्बन्धि लेखको नेपाली भाषामा अनुवाद भानु दाहालले गरेका हुन् ।)
‘उद्योग व्यवसायलाई सहुलियत दिनेगरि मौद्रिक नीति आउनुपर्छ’ (किशोर प्रधानको लेख)
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्व अर्थतन्त्र सुस्ताई रहेका बेला नेपालको अवस्था पनि
आलेख : नागरिकता विवाद : आफ्ना नागरिक अनागरिक हुन भएन
कालिका खड्का/काठमाडौँ । विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिन सात वर्षको समय धेरै भयो तथा
आलेख : प्रदेश नं ५ को उद्योग व्यवसायमा कारोनाको प्रभाव
निरा गौतम/ रुपन्देही । कोरोना भाइरसले विश्व अर्थतन्त्रमा पुर्याएको गम्भीर क्षतिको प्रभाव नेपालमा
बिग बास लिग डिसेम्बरबाट (तालिकासहित)
त्रिशुली नदिले बगाएको युवकको सशस्त्र प्रहरीद्वारा जिवितै उद्दार (भिडियोसहित)
१०१ वर्षीय भूमिहीनलाई जग्गाधनीको प्रमाणपूर्जा प्रदान
कोरोना भाइरसका कारण विश्वभरी पाँच लाख ८१ हजारको मृत्यु
मेडिकल सिटीका रुपमा विकास हुँदै चितवन
संयुक्त राष्ट्रसंघले दियो यस्तो चेतावनी !
कोरोना कहर : भारतमा मंगलवार थपिए अहिलेसम्मकै सबैभन्दा